Maxay tahay sababta ka dambeysa imaanshaha Xasan Sheekh ?
August 31, 2018 F.G 0
10-kii September, 2012 ayuu noqday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, kadib markii codad gaaraya 190 cod uu helay Wareegii u dambeeyay ee doorashada, isagoo ka guuleystay Sheikh Shariif oo helay 79 cod. Isaga, 8 February 2017 ayaa looga guuleystay doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho, ee uu kusoo baxay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Markii uu xilka wareejiyay kadib bishii March ee sanadkii hore ayuu ka duulay magaalada Muqdisho, sanad iyo bar kadib waxaa jiro arrimo badan oo is biirsaday oo sababay dib ugu soo laabashadiisa Muqdisho. Xasan Sheikh, Sababaha uu u yimid Muqdisho, wuxuu ku sheegay inuu wadatashiyo sameyn doono, kaasi oo ku saabsan xaaladaha dalka ka jiro. Xogaha aan heleyno ayaa sheegaya in imaanshaha Xasan Sheikh Maxamuud ee Muqdisho ay horboodayaan xildhibaano mucaaradaya dowladda hadda dhisan iyo shaqsiyaad kale oo dhaqaalo ku bixinaya yagleelida xisbi weyn oo ay ku mideysan yihiin ragii lasoo shaqeeyay Xasan Sheikh iyo Xubno kale oo Mucaarad ah. Arrinta kale ee keentay imaanshihiisa ayaa ah iney heleen warbixino la xiriira in madaxda taladda haya ay wadaan qorshe muddo kororsi ah iyo in la [Sii aqri]
Dowlada Kenya Oo Laga Dalbaday Inay Jawaab Ka Bixiso Afduubka Boqol Ruux oo Soomaali Ku jirto
Hay’addo udooda xuquuda aadanaha ayaa dowlada Kenya ka dalbanaya in dib loo helo inka badan 80 dhalinyaro ah oo mudooyinkii ugu dambeeyay siyaabo kala duwan loogu afduubtay gudaha dalkaasi sida lagu sheegay war qoraal ah oo ay si wadajir ah usoo wada saareen hay’adahaasi. Hassan Abdille oo ah agaasimaha guud ee hay’ada Muhuri ee udooda xuquuqda dadka muslimiinta ah ayaa sheegay in badi dadkan ay gacanta ugu jiraan saraakiisha dowlada kadib markii sida uu sheegay agaasimaha in ay tahay wax aad loogu xumaado isla markaana dhalin yaradaasi dib loogu soo celiyo deegaanadoodii ay kunoolaayeen. Agaasimaha oo sii hadlayay ayaa dhanka kale ugu baaqay madaxweynaha Kenya Uhura Kenyatta in cadaalada la horkeeno saraakiisha looga cabsi qabo in ay gacantooda kujiraan caruurtaasi Deegaanada ugu ba’adan oo dhalinyaradaasi laga afduubtay ayaa la sheegay in ay yihiin Tana River, Garissa, Mombasa, Kwale, Kilifi and Lamu, kuwaa oo ah xudunta ugu weyn oo ay kadhacaan weerarada ay fuliyaan Alshabab Agaasimaha guud ee hay’ada Muhuri ee u dooda xuquuqda dadka Muslimiinta ah ayaa ugu dambeyntii waxaa uu sheegay in 80kaasi dhalinyaro [Sii aqri]
Akhriso:Qodobadda Looga Hadlay Kulankii Xasan Kheyre iyo Xasan Shiikh Maxamuud
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa xalay ku booqday Hooygiisa Madaxweynihii hore ee soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta dalka dib ugu soo laabtay. Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uga warbixiyay Xaaladda guud ee Dalka iyo guulaha lagu talaabsaday. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo dhoweyn heer sare ah u sameysay Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo wafdi wasiirro ah oo uu hoggaaminayay Wasiirka Amniga XFS ay ku soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho. Madaxweynihii Hore ee Dowladda Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa shalay soo gaaray Magaaladda muqdisho, tan iyo markii doorashadii ka dhacday dalka looga guulaystay, islamarkaana talada dalka uu si rasmi ah u wareejiyay. Xasan Shiikh Maxamuud ayaa lagu wadaa in uu ku dhawaaqo xisbi siyaasadeed oo isaga uu guddoomiye u noqon doono, kana qeyb galaya doorashada ka dhaceysa dalka 2020-2021. Xasan Sheekh ayaa maanta markii uu dalka dib ugu soo laabtay ayaa sheegay inuu safar ujeedadiisa tahay xog ogaalnimo uu ku tagi doono gobolada dalka. [Sii aqri]
Madaxweyne Xaaf Iyo Golihiisa Wasiirada Oo Ka Hadlay Shirka Dhawaan Ka dhici Doono Magaalada kismayo
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa Magalada Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud waxa uu kulan deg deg ah kula yeeshay Xubno ka tirsan golihiisa Wasiirada. Kulanka ayaa intiisa badan ahaa mid xog-wareysi ah,sidoo kale Waxa uu wadatashi kala sameynayey Shirka Golaha Iskaashiga Dowlad Goboleedyada oo dhawaan ka furmaya Magaalada Kismaayo. Wasiirka Warfaafinta Maamulka Galmudug Maxamuud Aaden Cusmaan (Masegawaay) oo kulanka kadib Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in inta badan la-isku afgartay qodobadii ay uga hadleen kulanka labada dhinac. Sidoo kale Waxa uu sheegay in shirka diirada lagu saaray Ajandayaashii ay la tegi lahaayeen Madaxda Galmudug shirka 9-ka Bishaan la filayo in uu ka furmo Magalada Kismaayo ee Xarunta gobolka Jubbada Hoose. Hase ahaatee Lama Garanayo Kulankaasi Ujeedka ka danbeeyo balse Waxaa maalmahaan jiray khilaafyo u dhaxeeyay mamul goboleedyada iyo dowlada dhexe.
Madaxweyne Maxamed Farmaajo iyo Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping Oo Kulmay
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo booqasho ku jooga magaalada Beijing ayaa wada hadallo la yeeshay Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo iskaashiga. Wadahadallani ayaa waxay hordhac u yihiin Shirka Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika oo dhowaan furmaya. Madaxweyne Farmaajo ayaa dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping ku bogaadiyey dib u habaynta uu ku sameeyey siyaasadaha dalkiisa si waddanka Shiinaha loo gaarsiiyo horumar ballaaran. Sidoo kale Madaxweyne Xi Jinping ayaa ku ammaanay Madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisa horumarka ay ka gaareen dhinacyada siyaasadda, dibu dhiska dalka iyo dhaqaalaha. Labada Madaxweyne ayaa waxay isla lafa gureen qodobo la xiriira iskaashiga labada dhinac, ganacsiga iyo maalgashiga, hiigsiyada cusub ee iskaashiga dhaqaale, iyo dadaallada lagu xoojinayo xiriirka u dhexeeya Shiinaha iyo Soomaaliya. Sidoo kale Labada hoggaamiye waxay isla falanqeeyeen ka qaybgalka Soomaaliya ee Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika (FOCAC) iyo muhiimadda uu leeyahay hindisaha lagu dhisayo kaabayaasha dhaqaale ee loo yaqaan “Belt and Road Initiative”, kaas oo fududeynaya isku xirnaanta dalalka qaybta ka ah, korna u qaadaya horumarkooda dhaqaale. Madaxweyne Farmaajo ayaa qiray taageerada [Sii aqri]
Maxaa Ka Jir In Degmada Mahadaay aysan Laheyn Adeegyada Bulshada Iyo Mas”uul Ka Hadlo Dhibaatada Ka Jirta?
August 30, 2018 F.G 0
Adeegyadii bulshada degmada Mahadaay ee gobolka Shabellaha dhexe ayaa la sheegay in gabi ahaanba aanay shaqeyneyn. Sida Xarumihii waxbarashada, caafimaadka, saldhigga Booliiska iyo xarumo kale oo muhiim ah ayaa la sheegay in aanay shaqeyneyn. Tan iyo markii ay la wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya degmada Mahadaay ma aysan helin adeegyada bulshada, degmada waxaa ay leedahay Saldhig boolis hadana mashaqeeyo sidoo kale degmada waxaa ay leedahay Isbitaal kaasi oo la sheegay in uusan shaqeynin uuna u xirmay daryeel la’aan kadib markii dawo lahaan ay soo wajahday. Degmada Mahadaay malahan Maxkamad dadka loogu kala gar qaado halka sidoo kale la tilmaamayo in Iskuulka Magaalada in uu u xirmay Mushaar la’aan soo wajahday macallimiintii wax ka dhigayay sida ay sheegeen Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Magaaladaasi. Xildhibaan Maxamed Bashiir Daqarre oo ka mid ah Baarlamaanka Hirshabelle ayaa sheegay in Mas’uuliyiinta Hirshabelle ay ka gaabiyeen wax u qabashada bulshada ku dhaqan Mahadaay. “ Maamulka Hirshabelle waxaan leeyahay degmada Mahadaay il gaar ah ku fiiriya Saldhigga mashaqeeyo ciidamada gaarigii loogu talo galay waa uu yaallaa sababta uu u shaqeyn la’yahay ma garan [Sii aqri]
Ganacsatada Ajaaniibta ah Oo Dhac Loogu Geysanayo Magaalada Soweto Iyo Boliska Dalkasi Oo Daawanaya
Magaalada Soweto ee Dalka Koofur Afrika ayaa waxaa ka bilowday dhac loo geysanayo ganacsatada ajaaniibta ah ee ku sugan dalkaas. Falkan dhaca ah ayaa xoogeystay kadib markii labo ruux oo ka mid ah dadka reer Soweto la diley iyagoo doonayay in ay dhac u geystey goob uu ganacsi ku lahaa muwaadin Soomaali ah oo ka mid dadka ku ganacsada Soweto. Dad u badan dhalinyaro ayaa ku qamaamay goobaha ganacsatada ajaaniibta ah iyagoo dhammaanba qaadanayay wax walba oo goobtaas ay ka helaan. “Illaa 15 ruux oo Soomaali ah ayaa dhaawacyo ka soo gaartay falkan boobka ah ee bilowday shalay waxaana laga yaabaa in ay sii kororto.”ayuu yiri Suldaan Ducaale oo ka mid ah ganacsatada la boobay hantidoodii. Ganacsatada Soomaalida ah ee ku nool dalka Koofur Afrika ayaa waxaa ay baaq u direen dowlada Soomaaliya inay kala hadasho xukuumada Koofur Afrika sidii loo joojin lahaa falalka boobka ah ee loo geysto Soomaalida ku nool Koofur Afrika. Sanad walba ayaa waxaa lagu dilaa dalka Koofur Afrika tobanaan ganacsato Soomaali ah kuwaasoo lagu weeraro goobahooda ganacsi.
Khadiija Oo Tiri “Kufsashada Waxaa ii Dheeraa Korkayga Oo Sigaar Lagu Damiyay”
Booliiska dalka Morocco ayaa xiray 12 wiil oo yaryar oo ku eedaysan in ay si arxan darro ah u kufsadeen una jir dilayeen gabadh yar oo 17 jir ah muddo labo billood ah. Toddobaadkii hore ayay Telefishin u faahfaahisay sida burcad hubaysan ay u afduubteen bishii Juunyo. “Marnaba ma cafin doono – waxyeelo badan ayay iigaysteen,” ayay tiri. Arrintan ayaa caro ka dhalisay dalka Moroco, waxayna horseeday ol’ole dhanka online-ka ah oo lagu dalbanayo in caddaaladda la horkeeno kuwii masuulka ka ahaa dhibaatadaas. Baaritaan uu hoggaaminayo garsoore ayaa ka socda magaalada Beni Mellal, kuwa la xirayna da’doodu waxay u dhaxaysaa 18 ilaa 27, sida ay masuuliyiin u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Waxaa si wayn looga shakisan yahay wiil 20 jir ah oo wajahaya dacwado la xiriira kufsi, jir dil iyo in uu gaystay hanjabaad dil iyo in uu abuuray budhcad. kuwa kalana waxaa laga yabaa in ay wajahaan dacwado kuwaas la mid ah. Gabadhan yar oo Khadiijo la dhaho ayaa toddobaadkii hore ka soo muuqatay telefishin Moroco ku yaalla Chouf TV. Waxay kaameerada u [Sii aqri]
Kooxda Nottingham Forest ayaa sanadkii labaad ee taxane ah waxa ay koobka ka reebtay kooxda horyaalka Ingiriiska ka dheesha ee Newcastle United oo ay uga badisay 3-1. Nottingham Forest ayaa goolka koowaad dhalisay daqiiqadii labaad ee ciyaarta, waxaana ay kooxdaasi ka dheesha horyaalka labaad ee England ay sidaa ugu gudubtay wareegga saddexaad ee koobkan. Isla xalay waxaa wareegga saddexaad usoo gudbay kooxaha Everton ito Watford ka dib markii ay si sahal ah uga badiyeen Rotherham iyo Reading oo ay la kala ciyaareen. Dhanka kale, madaxii hore ee xiriirka kubadda cagta Koonfur Amerika, Juan Angel Napout, ayaa lagu xukumay 9 sano oo xabsi ah ka dib markii lagu helay inuu laaluush qaatay xilligii uu ahaa ku xigeenka madaxa FIFA. Ninkan u dhashay Paraguay ayaa sidoo kale lagu xukumay ganaax lacageed oo dhan 1 milyan oo dollar. Maalma ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale loo xukumay madaxii hore ee xiriirka kubadda cagta Brazil, Jose Maria Marin.
Itoobiya Oo Sameeysay Xafiis u Qaabilsan Hub Ka Dhigista Ururadii Hubaysnaa ONLF iyo OLF.
Xafiiska xiriirka dowladda federaalka ee Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in la sameeyay xafiis u gooni ah ururadii hubaysnaa ee dhawaan heshiiska la galay dowladda Itoobiya islamarkaasna ka shaqayn doono danaha ururadan. Xafiiskan ayaa ka shaqayn doonaa sidii si nabad ah hub ka dhigis loogu samayn lahaa ururrada hubaysan ee gogosha nabadeed ay xukuumadda u fidisay. Sidoo kalena, waxayaabaha uu qaban doono xafiiskan gaarka ah waxaa kamid ah sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa xubnaha ka tirsan ururrada ee doonaya arrintaasi. Xafiiska ayaa sidoo kale Lagu qori doonaa xubnaha doonaya inay noqdaan ciidaan. Sabtidii lasoo dhaafay ayay ahayd markii ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu ugu baaqay ururradan inay hubkooda si nabad ah kusoo dhiibaan islamarkaasna ay ku dagaalamaan firkadahooda iyo qalinka. Ururada dhawaan gogosha nabadeed ay dowladda Itoobiya u fidisay waxaa kamid ah ururka ONLF iyo OLF.